एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देंशन – NepalajaMedia
एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउन संसदीय समितिको सरकारलाई निर्देंशन
August 3, 2020 101
काठमाडौं, १९ साउन । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।सोमबार बसेको महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले एसिड पीडित महिलाहरुसँग छलफल गर्दै एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याउनुका साथै पीडितको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिले एसिड पीडितलाई सरकारी सेवामा प्राथमिकता दिएर उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि सहज वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । यस्तै, एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको भन्दै समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न निर्देशन छ ।
समितिमा एसिड पीडित संगीता थापामगर, मुस्कान खातुन र जेनी खड्काले परिवारको आर्थिक अभावले उपचारमा समस्या भइरहेको बताएका थिए । उनीहरूले एसिड आक्रमण गर्नेविरुद्ध कडा कानुनको व्यवस्था अभावले गर्दा यस्ता घटना बढिरहेको भन्दै कानून बनाउन समेत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म २० वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् । जसबाट १८ जना महिला र दुई जना पुरुष पीडित छन् । यस्तै, आजै महिला तथा सामाजिक समितिको बैठकले समेत सरकारलाई एसिड पीडितका सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
Prevत्रिवि चिकित्सा शास्त्रको स्‍नातक तहको परीक्षा स्थगित
Nextजातीय विभेद तथा छुवाछूतविरुद्ध संयुक्त जागरण अभियान
हे दैव ! अन्त्यमा केही सीप लागेन ! भर्खरै निभे कन्चन (हेर्नुस् भिडियो) (1324)